ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အကြံပေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ထိုင်းဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Prof.Dr. Surakiart Sathirathai တောင်ပြိုလက်ဝဲနယ်စပ်ရှိ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတွင် ပြင်ဆင်ထားမှုများကို ကြည့်ရှု – Eleven Media Group
Posted on January 25, 2018 by Eleven Media Group
တောင်ပြိုလက်ဝဲနယ်စပ် လက်ခံရေးစခန်းများသို့ ထိုင်းဒုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့်အဖွဲ့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ထိုင်းနိုင်ငံအငြိမ်းစား ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prof.Dr. Surakiart Sathirathai နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ တောင်ပြိုလက်ဝဲနယ်စပ်ရှိ ပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတွင် အသင့်ပြင်ဆင်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်က ကွင်းဆင်း ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၅၅ မိနစ်တွင် တောင်ပြိုလက်ဝဲသို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာသူများအား စိစစ်လက်ခံရေး ဆောင်ရွက်ရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အသီးသီးမှ ပြင်ဆင်ထားသည်များကို ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ထို့နောက် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ပြန်ဝင်လာသူများ ၀င်ရောက်မည့် ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး တံတားအနီး စစ်ဆေးရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် အဆောက်အအုံများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ချစ်ကြည်ရေးတံတားအနီး ကျောက်တိုင်တွင် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီး မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် မောင်တော ကညင်ချောင်း စီးပွားရေးဇုန် တည်ဆောက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ပြန်ဝင်လာသည့် ဘင်္ဂါလီများအား ယာယီထားရှိမည့် လှဖိုးခေါင်ကြားစခန်းသို့လည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာသူများကို လက်ခံရန် စီစဉ်ထားရှိမှု
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအကြီးအကဲများ လိုက်ပါခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် CCTV ၊ TV asahi အစရှိသည့် မီဒီယာများလည်း လိုက်ပါလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံ အငြိမ်းစား ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prof.Dr. Surakiart Sathirathai ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ဦးဆောင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီတို့ နေပြည်တော်ရှိ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေ ရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ်အရ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသူများကို စနစ်တကျ စိစစ်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းများ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်တွင် ပြန်လည် လက်ခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုန်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာသူများအား တောင်ပြိုလက်ဝဲ လက်ခံရေးစခန်းတွင် လည်းကောင်း၊ ရေလမ်းဖြင့် ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာသူများအား ငါးခူရလက်ခံရေးစခန်းတွင် လည်းကောင်း ပြန်လည်လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ လက်ခံရာတွင် သဘောတူစာချုပ်အရ ကနဦးအနေဖြင့် စခန်းတစ်ခု၌ တစ်ရက်လျှင် လူဦးရေ ၁၅၀ စီဖြင့် စခန်းနှစ်ခုအတွက် တစ်ရက်လျှင် စုစုပေါင်း ဦးရေ ၃၀၀ လက်ခံမည် ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လျှင် ငါးရက် လက်ခံသွားမည် ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်လက်ခံမည့် လူဦးရေအား နှစ်နိုင်ငံ ထပ်မံညှိနှိုင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ခံရေးလုပ်ငန်းများ ကဏ္ဍအလိုက် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ ၀န်ထမ်းများလည်း လက်ခံရေးစခန်းများသို့ ရောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်း မရှိသေးပေ။
ဘောလခဲမြို့တွင် တရားမ၀င် နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီရှစ်ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သဖြင့် ၎င်းတို့အား အရေးယူရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် ဘောလခဲမြို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်၌ လွိုင်ကော်မှ မော်ချီးကျေးရွာသို့ စိုးတင်